यी सर्ने रोग झन्झन् भयावह बन्दै, ६६ प्रतिशतको निधन ! - Everest Dainik - News from Nepal
यी सर्ने रोग झन्झन् भयावह बन्दै, ६६ प्रतिशतको निधन !
नढाँटी भन्नुपर्दा मेरी आमालाई मुधमेह रोग छ । उनलाई मधुमेह भएको झण्डै ४ वर्ष भयो । मेरो अंकललाई पनि ब्लड प्रेसर हाई छ । अझै भन्नुपर्दा केही दिन पहिला उनी ब्लड प्रेसर हाई भएर अस्पताल नै भर्ना हुनुपर्ने अवस्थासमेत आइपरेको थियो।
म बस्ने घरबेटी आन्टीलाई त झन् मधुमेह, ब्लड प्रेसर दुवै रोग छ । खानामा धेरै कुरा बार्नुहुन्छ । खानपानभन्दा धेरै औषधिमा खर्च हुन्छ । पल्लो कोठाको अङ्कललाई पनि मधुमेह छ । उहाँ दैनिक औषधि खानुहुन्छ । आफूलाई मन लागेको खानेकुरा खानु पाउनुहुन्न । केही कुरा खानुस् भन्दा खाने मन छ तर मधुमेह छ भन्नुहुन्छ ।
तर नेपाल सरकारसँग यस्ता नसर्ने रोग लागेका नागरिकको सङ्ख्या कति छ भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क छैन । रोगले हरेक नेपालीलाई छोइसकेको यो अवस्थामा सरकारको कार्यक्रम भने बल्ल ३० वटा जिल्लामा पुगेको छ । इलाम र कैलाली जिल्लाबाट विगत ३ वर्षअघि सुरु भएको नसर्ने रोगसम्बन्धी कार्यक्रम ३० जिल्लामा सीमित बनेको हो ।
नसर्ने रोगसम्बन्धी पनि स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख डाक्टर फणिन्द्रप्रसाद बरालका अनुसार हाल सरकारले ४ नसर्ने रोगका बारेमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । दम, क्यान्सर, मधुमेह र मुटु तथा रक्तनली सम्बन्धी ४ रोगका बारेमा जनचेतना जगाउन कार्यक्रम सरकारले सुरु गरेको बरालको भनाइ छ । एक अनुमानित तथ्याङ्अनुसार ८० प्रतिशत रोगको भार यिनै ४ रोगले लिएको बताइन्छ ।
नेपालमा ठूला–ठूला महामारी धेरै पटक सर्ने रोगकै कारणले भएको थियो । तर, अहिले परिस्थिति उल्टो छ । अर्थात नसर्ने रोग सरकारको चुनौतीको रूपमा आएको छ । सरकारको अनुमानित तथ्याङ्कअनुसार निधन हुनेमध्ये ६६ प्रतिशत नसर्ने रोगकै कारणले हुनुका साथै इन्जुरीलाई समेत जोड्दा बढेर ७५ प्रतिशत पुग्छ । नसर्ने रोग लाग्ने मुख्य कारण सूर्तिजन्य पदार्थ, मादक पदार्थ सेवन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल र अस्वस्थकर खानापान रहेको चिकित्सकहरुको भनाइ छ ।
याे पनि पढ्नुस स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउनेको संख्या बढ्दो
नसर्ने रोगसम्बन्धी नेपालका विभिन्न १७ वटा मन्त्रालयको सहसचिवसहितको एउटा कमिटी छ । मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा सबै मन्त्रालयको सचिव रहनेगरी उच्च स्तरीय कमिटी गठन गरिएको हो । तर अहिले यो कमिटीले लक्ष्यअनुसार काम गरेको देखिँदैन । एजेन्सी